DAAWO VIDEO:Axmed Madoobe oo Weeraray Khayre Iyo Farmaajo. – Marqaanmedia24.com
DAAWO VIDEO:Axmed Madoobe oo Weeraray Khayre Iyo Farmaajo.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam ayaa Maanta Magaalada Baydhabo kaga qayb galay furitaanka shirka Madasha Dowlad Goboleedyada dalka.
Shirkan oo ah kii labaad ayaa socon doona mudo labo maalmood ah iyadoo ay ka qayb galayaan Xildhibaano Wasiiro iyo Masuuliyiin kale oo heer Dowlad Goboleed ah.
Qudbad Dheer oo halkaasi uu ka Jeediyey waxaa uu Uga hadlay Siyaasada Dowlada Faderalka Soomaaliya.
Halkani Riix Video Qudbada Axmed Madoobe
DAAWO VIDEO: Kaftanka Siyaasada Axmed Madoobe Iyo Gaas Lacag Imaraadka & Mucaaradnimada
Khudbadihii aan bog hore ka dhegeystay waxaa oogu macquulsanaa tii Cabdi Weli Gaas oo runtii shaaca ka qaaday labo qodob oo aan in muddo ahayd halkan kaa soo tabinayay oo ahaa in aan weli la isku waafaqin nidaamka dawliga ee hannaanka federaaliga ah ku suntan ee uu dalku isku dhaqi doono, taas oo hakis galisay dhammeystirkii dastuurka hilaadahan looga fadhiyay. Waa sababta aniga iyo dad badan yaabka iyo amankaagga ku ridday xaqiiqdii.
Edda iyo eynta dhabaqan waxaa xambaarsan Xassan Shiikh Maxamuud oo sida hadda muuqata kas iyo ujeeddo cagta u saaray in labadan qodob xilligii loo qorsheystay ee New Deal-ka ku saxiixnaa aan loo dhaqan galinin oo iyaga oo qabyo ah ay doorashadu qabsoonto. Kollay ujeeddadiisu in ay ahayd federaal-diidnimo iyo qabyadaas oo uu is lahaa dib u doorashadaada qiil ha u noqoto bayaan ayay iskaga caddahay. Waa fashil siyaasadeed ee aad u xun runtii qaabkaas uu u dhaqmay isaga oo danihiisa ka soo soke mariyay danta qaran. Waxaa se meesha ku mudan su’aasha ku saabsan sida dastuurku loo dhammeystiri doono iyada oo aanay gobollada Togdheer iyo Woqooyi Galbeed weli lahayn maamul goboleed si rasmi ah loo ansixiyay.
Kaasina wuxu ahaa wariyaha dadka jabay ugasoo warama gobolka SANAAG..MR AARKA SANAAG….
Aarka sanaag ka waran ceerigaabo, 18 May baa soo socotee sidee loogaa dabaal dagayaaa?!
Ninyahow haddii aad ahaan lahayd nin reer woqooyigeena asalka ah sidooda u xifaaltami kara ee dhaadi kara sida hawraarta loo kala dhigdhigo waan kaa dhuri lahaa, laakiin waanad u fara dhuudhuubnayn oo sidaadii baad madasha ku dhiiqeysan marka aad dacarta ku dhansiiyo.
Anigu siyaasadda aynu isku diiddannahay iyo way ii kala soocan yihiin dhaqankeena iyo dhalashadeena woqooyinimo ee aynaan ku kala dhaqaaqi karaynin. Dhayal ha u malaynin heerka aynu maanta wada joogi lahayn haddii aydun iidoornimada ka baxdaan oo aad dhaahdaan dhanka gurracan ee aad xaajada uga soo dhacdeen.
Yaabaa is gaadhayba!!
Waa kaa dee! Soo bax baa la leeyahay oo ay sacabbada sii leefaysaa!
Halkaa nagu kala daa haddaba.
Waal Waalataye Naa Xerada Gal
Usha maad uqaban..USHER.
GOD BLESS US!!😎
sidaad sheegtay ninku maaha nin somalilana. hoirtiiba waa ogaa taas.
marna yay dhicin inaad HADAL DAC u gaysato iidoor
si hufan baad ugu jawaabtay
Koley saan fili karo iidoor iyo dhulbahante waxay adeegsadaan lahjadooda waxayna u yaqaanan DEELQAAF. ANAguse hadaan nahay reer mudug afkayaga deelqaaf waxaan u naqaan marka gabaygu wajaq galo ama waasho oo marna barri marna bogax lala aado ama isku dhex yaac.
marka hadal dacu daruuro maaha inay noqoto gabay oo waa sheeko aan mudan lagu sheegin oo lagu wajaho dad mudan ah.
markaas dadkaas waxaa la gudboon inay yeelaan sidii cartan (hashii cali dhuux) ay diiday inay biyaha dhiiqada ah af iyo ilig saarto
qofka mudanka ahna waa saas oo markii hadal dac imaato waa diidaa inuu afka u quuro
Arimaha ay maamul goboleedka qoonsadeen waa:
In qaladaadkii horay loo galay aan loo galin Sida la ogyahay dadka Gobolada kale dega Xamar markay u soo giireen in xasuuq iyo tacadiyo loogu geystay.
Dadka gobolda iyo degmooyinka iyo tuulooyinka fog in ay halkooda ku helaan waxay u baahanyihiin. Waxaa dhacda tusaale tuulooyinka fogfop dadka ku nool Kaneeco ama bronkiito ama shuban daawo ma helaan waa u dhintaan.
Waxbarashada iyo shaqaaleynta iyo tababarada iyo deriseynta goobolada yaa ka hirgelinaaya. Deeqaha ay Carabaha iyo turkiyiinta ay bixiyaan Soomaali oo dhan miyeysan lahayn. Jawaabtu hadii ay haa tahay Wadooyinka llacaga lagu dhisaayo so wax maka laha miskiinka jooga Kuunyo Barow XIGMADU WAA CADAALADA hala fuliyo. Qofna laguma qancinkaro waxaa wax ku leeyahay